‘भेनेजुएला प्रकरणमा बोल्नु आवश्यक नै थिएन’ «
‘भेनेजुएला प्रकरणमा बोल्नु आवश्यक नै थिएन’
प्रकाशित मिति : माघ २८, २०७५ सोमबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्काले भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल सरकार र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वक्तव्य जारी गर्नु नै आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, “प्रचण्डजीले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाले हस्तक्षेप ग-यो, साम्राज्यवादी ‘कू’ ग-यो भन्नुभयो । प्रचण्डले त्यसरी भन्नु आवश्यक थिएन ।”
नेता खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किसकेपछि सरकारले पनि भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डकै लाइनमा वक्तव्य जारी गरेको सुनाए । उनले भने, “रुसले क्रिमियामा हस्तक्षेप गर्दा उहाँहरु किन बोल्नुभएन ? सिरियामा किन बोल्नुभएन ?”
उनले भने, “सरकारले पनि प्रचण्डकै लाइनमा वक्तव्य जारी ग-यो । नेपाल र अमेरिकाबीच १९४७ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध छ, हामीलाई अमेरिकाले असाध्यै ठूलो आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ । सरकारको वक्तव्यका कारण अहिले सम्बन्धमा ह्रास आएको छ । नेपाल सरकारले यस्तो वक्तव्य जारी गर्नु आवश्यक थिएन ।” खड्काले अमेरिकालाई नेपाल सरकारले चिढ्याउने काम गर्नु आवश्यक नै नभएको जिकिर गरे ।
उनले इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी भएकोले चीन रिसाएको हो कि भनेर त्यो सन्देहलाई मेटाउन प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाविरुद्ध यस्तो वक्तव्य दिएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताए । खड्काले यही कदमले गर्दा अमेरिका र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर भने परि नहाल्ने जिकिर गरे । उनले भने, “अहिले नै ठूलो असर परिहाल्दैन । हालै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डजीलाई भेट्नुभएको कुरा आएको छ । त्यसैले सम्बन्ध बिग्रिहाल्दैन ।”
फरक प्रसंगमा उनले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्ण रुपमा असफल भएको आरोप लगाए । उनले भने, “अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । यो ५ महिनामा ५ खर्ब ६९ अर्बको व्यापार घाटा छ । निजी क्षेत्रको पनि त्यस्तै समस्या छ ।”
दुई तिहाइको सरकारले उत्ताउलो कुरा गरिरहेको उनको भनाइ छ । खड्काले भने, “जनताका आधारभुत कुराहरु यो सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारको यो एक वर्षको पर्फर्मेन्स होपलेस छ ।” मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तै रहिरहे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र दातृ निकायहरुसँग ऋण मागेर धान्ने दिन आउनसक्ने खतरा पनि खड्काले औंल्याए । उनले भने, “यस्तो अवस्था आयो भने जनता भोलि सडकमा आउँछन् ।”
डिजिटल व्यवसाय प्रवद्र्धन गरौं
स्थिर ब्याजदरले पैदा गर्ने चुनौतीहरू
चाडपर्व लक्षित सुपथ पसल बिहीबारदेखि
विदेशबाट फर्किर तरकारी खेती
कोरोना महामारीमा सूचनाको हकको महत्वबारे आयोगको अन्तरक्रिया